MSME Virtual Capacity Building Program Timeline! – Impact Hub Yangon
UNDP Myanmar မှကြီးမှူး၍ ပြုလုပ်သွားမည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသေးစား၊ အငယ်စား နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ရိုက်ခတ်မှုများမှ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တည်တံ့စေရန် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်ထုပ်လုပ်ရေး၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး နှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို အခြေခံသော MSME လုပ်ငန်းများအား အဓိကထား၍ စီးပွားရေး စီမံကိန်း နှင့် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးမည့် စီးပွားရေးအထောက်အကူပြုသင်တန်းတွင် ပါဝင်လိုပါသလား
Business Ongoing Stage (လုပ်ငန်းလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ) ဖြည့်သွင်းရမည့် လင့်ခ်: https://bit.ly/YgnMdyKachinBusinessOngoingStageApplicatio…
သင်တန်း၏ အချိန်ဇယားအား အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Previous Only3Days left to Application Closing!
Next We are looking for Project based Entrepreneurship Program Manager!